Ihe mgbaru ọsọ nke 2007 | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 24, 2007 Sunday, July 27, 2014 Douglas Karr
Abụ m onye kwere ekwe na atụmatụ. Enweghị nzukọ, atụmatụ ọrụ, ma ọ bụ atụmatụ mmepe onwe onye kwesịrị ịkwụsị n'enweghị nzaghachi nye ajụjụ 3:
Ọ bụrụ na ndị ọzọ esetịpụghị m ihe mgbaru ọsọ, mgbe ahụ ana m arụ ọrụ iji setịpụrụ m onwe m. 2007 dị ka ọ ga-abụ nnukwu afọ.
Onye? M. Mgbe ole? 2007. Kedu? Ndị a bụ ihe mgbaru ọsọ m:
Nyere nwa m aka n'ụzọ ọ bụla m nwere ike (ọ kachasị ego) ya mere ọ gụsịrị akwụkwọ na nsọpụrụ ma nwee ihe ịga nke ọma n'afọ mbụ ya na Mahadum Purdue na IUPUI. Nzọụkwụ mbụ bụ n'ụzọ - ọ nabatala ya.
Mezue akwụkwọ teknụzụ na ịde blọgụ. Mgbe m dere Nduzi Blog-E-Metrics Simplified, M jidere ahụhụ ahụ. Ya mere, anọ m na-arụ ọrụ De blọgụ - Afọ Mbụ, kemgbe ahụ. Nọgidenụ na-na mkpịsị aka gafere… M n'ezie zigara a gbara na nchịkọta akụkọ a nkeji ole na ole gara aga.
Dezie isiokwu nke m ma ziga ya na saịtị ọzọ nke SeanRox, Meghee Imewe Obodo. Enweghị m obi ụtọ na isiokwu m dị ugbu a ma ọlị… teknụzụ dị mma, mana ọ chọrọ nnukwu ọrụ na aesthetics. O naghi eziputa ihe m na acho ime ka ndi nke gi biako kwa ubochi.
Mmemme nke m WordPress ngwa mgbakwunye. M gbanwetụrụ a Kpọtụrụ Ụdị ngwa mgbakwunye ka ịkwụsị Spam achọghị n'oge gara aga… mana ọ ga-amasị m ịzụlite ngwa mgbakwunye site ọkọ.
Nyere onye were m n'ọrụ aka iduzi ngwa anyị ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya SaaS ngwa ụlọ ọrụ weebụ ahụbeghị ma ọ bụ jiri ya. Anyị enweela ọganihu na ihe ịga nke ọma na afọ ole na ole gara aga, mana oge eruola ka anyị kwụsị ijigide ma hapụ ụlọ ọrụ ahụ n'ájá. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ a na-eme ka m hie ụra n’abalị.
Banye n'udi! Amaara m na nke ahụ na-ada ụda, mana ike gwụrụ m oge niile, anaghị m emega ahụ oge niile m kwesịrị. N'ezie, alaghachiri m na ngwụsị ngwụsị izu a na nke mbụ m na ọnwa. Ọrụ na-etinye m na isi m kwa ụbọchị na ịde blọgụ na-eme m na ya n'abalị. Aghaghị m ịgbanwe àgwà m!
Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya… ihe mgbaru ọsọ m maka 2007. Gini bu ebum n’uche gi? Ọ bụrụ na ị mebeghị nke ọ bụla, biko mee ma kesaa ha na blọọgụ gị. Tinye trackback maka ntinye a na nke gị ka anyị niile nwee ike zute azụ ọzọ na Jenụwarị ma tụlee otu anyị mere.
Tags: 2007douglas karrihe mgbaru ọsọWriting
Enwere m ike ị nweta ego m, Wikipedia?
Jenụwarị 24, 2007 na 11:42 PM
Emere m ihe yiri nke ahụ na blọọgụ m, nnukwu uche na-eche myiri 😉
Echiche ọzọ m butere n'oge na-adịbeghị anya bụ ijide ibe gị maka nsogbu ego eg Joe na-agwa m na ọ ga-emezu ebumnuche ya nke imegharị websaịtị ya na Satọde na-esote ma ọ bụrụ na ọ meghị, o ji m $ 20
Ọ dị ịtụnanya na nke a na-enyere mmadụ aka imezu ebumnuche ya. Post a dị ebe a.